UKylin Li ubonakalisa uthando olukhulu kumzobo wakhe wedijithali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobi wedijithali othi uthando olukhulu Photoshop kwaye loo mizekeliso yedijithali esibeka phambi kwezilwanyana ezimnandi ezinje ngezo zisichukumisayo entloko kunye ne-unicorn enamaphiko.
UKylin Li unokufunyanwa ngokugqibeleleyo kumaqweqwe ayo yonke imidlalo yevidiyo ikhonsoli kunye nePC apho amajoni, izilo kunye nazo zonke iintlobo zabalinganiswa badlula phambi kwamehlo ethu ukusikhuthaza ukuba singene kwezi zintle nakwihlabathi eliphakathi. U-Li ngumbonisi wedijithali onemisebenzi eliqela esemgangathweni omkhulu kwaye ngenxa yesi sizathu sihambile kule migca ukubonisa inxenye yawo.
Umzobi osekwe eBeijing, eChina kwaye kuthi kwimisebenzi yakhe emininzi asise phambi kweedragons ezimnyama, amajoni anokuvela kwindalo iphela yeWarcraft okanye i-unicorn enamaphiko ekubonakala ngathi iwile esibhakabhakeni esinye.
Iphalethi yombala esinokuyifumana kwifayile ye- imifanekiso efanayo kaBen Thompson, Omnye wababonisi beBlizzard obumbe inani lezilo kunye nabalinganiswa ababalulekileyo njengoDiablo ngokwakhe.
U-Li uneminye imisebenzi ebalaseleyo yokusisa ngaphambili abalinganiswa ababhinqileyo njengoko kunjalo kwi «iinyembezi» Apho indlovukazi ye-elf ibonisa ubumnandi bayo kunye nendawo ebandayo. Uthotho lwemisebenzi yodidi oluphezulu endinokuthi sonke sabelane nabanye ngalo kule migca, kodwa ndiyakukhuthaza ukuba udlule kwiArtstation yakho.
Mva nje siye saneminye imizekelo enomdla kwimizobo yedijithali Ukunyuka kwesaqhwithi, U-Elena Sai kunye namantombazana akhe ayoyikisayo o UKare Huan kunye naye «Unodoli». Umzekeliso wedijithali osifumana ngcono kwaye ungcono isebenza loo mda kumgangatho omangalisayo Kwaye amaxesha amaninzi asikhe sihambe ngamagama amakhulu ngoku kulo mzekeliso. UThompson ukhankanyiwe, siza kufika emsebenzini wakhe kungekudala ukuze singene kwimizobo eyenzelwe i-Hearthstone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzekeliso wedijithali kaKylin Li